Shaqaalaha Diyaaradaha Boeing oo la sheegay in ay sii ogaayeen cilladda haysata nooca 737 Max |
Shaqaalaha Diyaaradaha Boeing oo la sheegay in ay sii ogaayeen cilladda haysata nooca 737 Max
Diyaarad kale oo isla noocaasi ah oo laga leeyahay dalka Induniisiya ayaa iyana bishii Oktoobar ee sanadkii 2018 ku dhacday badda wax yar uun ka dib markii ay ka duushay garoon ku yaal Jakarta. Shilkaasi ayaa waxaa ku dhintay 189 qof oo saarnaa diyaaraddaasi.
Maamulka Duulimaadyada ee dalka Mareykanka ayaa macluumaadkani ku saabsan in cillad lagu arkay nooca diyaaraddaani xilligii ay tijaabo ku jirtay ku tilmaamay mid walaaceeda leh, waxa uuna sheegay in uu sharraxaad deg deg ah ka dalban doono shirkaddaasi.
Dukumeentigan ayaa soo shaac baxay xilli bishan gudaheeda uu billaaban doono dhageysiga dacwad ka dhan ah shirkaddan.
Madaxa shirkaddan Boeing, Dennis Muilenburg, ayaa sidoo kale lagu wadaa in uu caddeeyo waxa uu ka ogyahay cilladda lagu arkay nooca diyaaradda ay shirkaddaasi sameyso ee 737 Max.
Shirkadda Boeing ayaa sheegtay in ay gacan ka geysanayso baaritaannada lagu wado 737 Max, taa oo tan iyo bishii Maarso ee sanadkan la hakiyay isticmaalkeeda.
Khubarada baaritaannada ku sameynaya burburkii diyaaraddaasi ee gudaha Itoobiya iyo Induniisiya ayaa baaritaankooga diiradda ku saaray barnaamij MCAS la yirahdo oo diyaaradda u sahlaya in si fudud ay hawada ku duusho.
Baaritaanno la sameeyay ayaa lagu ogaaday in cillad dhanka barnaamijkaasi ah iyo cillad kale oo dhanka qalabka diyaaraddaasi ah ay qeyb weyn ka qaateen in duuliyeyaasha diyaaraddani ay xakameyn waayaan diyaaraddaasi.
Shirkadda Boeing ayaa burburka labadaasi diyaaradood ku aaneysay macluumaad khalad ah oo la geliyay hannaanka ay diyaaraddani ku shaqeyso, waxa ayna ballanqaaday in ay wax weyn ka badali doonto si loo hubiyo badqabkeeda.
Balse baaritaanno la sameeyay ayaa lagu sheegay in shirkadda Boeing iyo maamulka duulimaadyada Mareykanka aysan si fiican u eegin cilladda haysata hannaanka diyaaraddaasi.
Shirkaddan ayaa la sheegay in “bilo ka hor” ay ka war heshay farriimaha ay is-dhaafsadeen duuliyeyaashii ka qeyb qaatay tijaabada diyaaraddan. Duuliyihii cilladan shaaciyay ayaanan haatan u shaqeyn shirkaddaasi.
Qaybaha sare ee diyaaradda Boing 737-ng ayaa dhammaadkii bishii Sebteembar lagu arkay dildillaac.
Marki uu warkaasi soo if-baxay wixi ka dambeeyey wakaaladda ammaanka u qabilsan diyaaradaha dalka Mareykanka ayaa amar ku bixisay in diyaaradaha nooca Boing 737-ng baaritaanno deg deg ah lagu sameeyo.
Wakaaladdan ayaa sheegtay in “diyaarado in muddo ah shaqeynayey marki la damcay in dib u habeyn lagu sameeyo lagu arkay dildillaac ku yimid jambiga kore ee diyaaradaha”.
Shilalkaasi ka dib waxaa dunida oo dhan la hakiyay isticmaalka diyaaradda nooca Boeing 737 Max.
Dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in saameynta markii hore ay keentay halkinta diyaaradda 737 Max ay u muuqatay mid cayiman, balse waxaa suurtagal ah in saameynta ay sii badato haddii aanan muddo dheer loo ogolaanin in ay duulimaad sameeyso.
Hakintaa awgeed ayaa shirkadda Boeing waxa si ku meel gaar ah hoos ugu dhigtay soo saaridda diyaaradaha nooca 737 oo suuq weyn dunida ku lahaa, ka dib marki ay dhaceen shilalki diyaaradeed ee Itoobiya iyo Induniisiya.
“Shirkadda Boeing oo bishiba soo saari jirtay 52 diyaaradood laga billaabo bartamaha bisha April tirada diyaaradaha ay bishi soo saarto iney ka dhigeysaa 42 diyaaradood” sida ay sheegeyso warbixin qoraal ah oo shirkadda ka soo baxay.